ULWANDLE LWABUBUCELA PHAMBI, IZILWANYANA EZIFUMANEKAYO OASIS!
Ukuphefumla ngokugqibeleleyo, Ukusukela oko uhamba ngomnyango, uya kungena kuhambo lolwandle olunomlingo.
Uphumle, uvulekile, unomoya & uCosy, unombono wokuphefumla!
Ibekwe kanye phakathi kweendawo ezi-2 ezahlukeneyo zaseBargara Beach kunye neArchie's, Kelly's & Rifle Range Beaches. Iimitha ezingama-500 ukuya kulwandle lwaseKelly. Imizuzu emihlanu ukuya eBargara Village kwikofu kunye nokutya. Imizuzu esuka eBargara Central, Woolies & Aldi & iivenkile ezizodwa.
Sinobubele kwaye sine-NBN i-wifi kunye ne-Smart TV.
Iindwendwe ukuza kuthi ga ngoku zichaze indawo yethu njenge "Ngenene sinento ekhethekileyo".
Relax kwi-hammock ngelixa umamele amaza abetha apha ngezantsi.
Ukusukela oko uhamba usiya kumnyango wesango lokhuseleko, uyakuqala ukuziva ngathi uhamba kuhambo lolwandle olunomlingo.
Kanye ngaphakathi kwesango langaphambili kukho intendelezo ebanzi elungele ukonwabisa unyaka wonke, ikwabonelela ngendawo ekhuselekileyo nekhuselweyo yezilwanyana zasekhaya.
Ukungena ngeengcango zangaphambili kukuthatha ukwikhaya lethu elipholileyo, elizolileyo, nelinomhlaba kakhulu nelipholileyo. Ngesilingi eziphakamileyo ezirhangqwe phezulu, indawo ivakala inkulu, kwaye umbono kukuphefumla. Eyakho indawo yokufihla intloko yabucala.
Ngaphantsi kweemitha ezili-100 ukuya kwiCafe ekufutshane ephinda kabini njengevenkile efanelekileyo. Ilungele ikofu yasekuseni! Iimitha ezingama-500 ukuya eKelly Swimming Beach.
Embindini wekhaya lolwandle kukho indawo yokuphumla efudumeleyo neyamkelekileyo enemibono enomtsalane ukuya emanzini ngemithi yepandanus. Uya kuziva ngoko nangoko ngathi ubalekele kwindawo yakho yabucala ye-oasis.
Iphiko elingasentla lekhaya lihlala amagumbi amabini okulala amathathu amakhulu. Onke amagumbi okulala abonelelwa kakuhle kukuhamba zombini nangona i-ensuite (enokufikelela kabini 'kwejack & jill'), eneShower & Vanity, kunye negumbi elahlukileyo elinebhafu enendawo yeshawari encamatheleyo, 'Powder' eyahlukileyo. Igumbi elinezinto ezingamampunge / isinki kunye negumbi langasese elahlukileyo elingaphandle kwegumbi lomgubo. Indlu yangasese yahlukile kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela. Ifanelekile kubahambi beqela.
Kukho neshawari yangaphandle!
Omabini amagumbi okulala kaKumkanikazi anebhedi enkulukazi kunye neAircon. Ukongeza, i-Smart TV ekhoyo kwi-Master Bedroom.
Indawo yokuhlala engundoqo ineyunithi enkulu kakhulu ye-8 kilowatt ye-Aircon, engaphezulu kokwaneleyo ukulungiselela indlu yonke ngokwayo ukuba iingcango zangaphakathi zegumbi lokulala zishiywe zivuliwe. Ke ukuba awumelani nobushushu kakuhle, sikugqumile!
Umlingo wamaza antlithekayo ebusuku uya kukushukumisa ukuba ulale kwi-Master Bedroom nayo. Okhethekileyo ngokwenene.
Onke amagumbi okulala anendawo eyaneleyo yokugcina iimpahla kunye nokuhamba komoya kwaye uya kukhuliswa ukuba ulale ngesandi esimnandi solwandle.
Igumbi lokulala lesithathu lilala 4. Iseti yeebhanka ezine Double phantsi, eyodwa phezulu, kunye nokutsala ibhedi eyodwa phantsi.
Igumbi lokuhlala likwahlala abantu aba-2 abongezelelweyo kwisofa yobukhulu bokumkanikazi.
Ngolwandle lokuqubha umgama nje omfutshane wemizuzu eli-10, kwaye isitalato esikhulu sithengisa umgama wemizuzu emi-2 kuphela, le yeyona ndawo ibalaseleyo! Awuziva ufuna ukuqhuba imizuzu emi-2? Zama ikhefi yethu encinci yasekhaya, eneendlela ezenziwe ekhaya kuphela ukusuka emnyango! Isondele kakhulu kwezo kofu zifuneka kakhulu kusasa!
Ikhitshi lethu lixhotyiswe kakuhle ngoomatshini bekofu yeVitorio pod, ubisi, ijuicer, iblender, isandwich press kunye nayo yonke into onokucinga ngayo kwimpahla nakwizixhobo zombane!
Ukubuyela emva kwigumbi lokuphumla kwaye ungene ekhitshini, kwindawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala, uya kuqala ukuqonda ukuba kutheni le ndawo ikhethekileyo. Ikhitshi yesitayile se-galley inebhentshi yamaplanga yebrashi epholishiweyo yaseFransi, umphezulu wokupheka wegesi kwaye uxinene ngokwaneleyo ukuba ulungele nawuphi na umpheki wasekhaya kwaye unxibelelana ngokulula neendawo zokuhlala zangaphakathi nangaphandle.
Uya kufumana isitayile se-galley yokuhlamba ibekwe ukuya ekupheleni kwekhitshi kunye newasha kunye nesomisi. Nangona, siyazicela iindwendwe ukuba zithintele ukusebenzisa isomisi ukulungisa imozulu embi apho kunokwenzeka.
Uya kuba nakho ukonwabela eyona ndawo yokutyela i-alfresco kunye negumbi langaphakathi / elingaphandle / indawo yokutyela. Ifanelekile ukuhlala ngasemva kunye nokuthatha umbono omangalisayo.
Okanye kutheni ungabambi incwadi kwaye ukhabe umva kwelinye lamagumbi okuhlala ilanga okanye i-hammock?
Eli khaya likwakhona phakathi kweendawo ezi-2 ezahlukeneyo zeBargara Beach kunye neArchie's Kelly's Beach ukuya emantla kunye neRifle Range Beach emazantsi. Ngeendlela zokuhamba ezolula ecaleni konxweme olungaphambili, kulula kakhulu ukunxibelelana nobomi belali yaseBargara ngaloo ikofu kunye nekeyiki okanye ukhetho lokutyela. Ukuthenga okunesandla kukude kwimizuzu nje ukuya eBargara Central kurhwebo lweentsuku ezisixhenxe nguWoolworths Aldi kunye neevenkile ezizodwa.
Kwiimfuno ezinkulu zokuthenga, isixeko esikhulayo saseBundaberg yimizuzu nje ukuya entshona.
Ndwendwela indawo yofudo, Dive e-Elliot Heads okanye wenze uhambo losuku ukuya “kwiLady Musgrave” Island. Ngokwenene le yeyona nto uphumlayo yokubalekela kwitropiki!
Uqhagamshelo lwemihla ngemihla kwikomkhulu laseQueensland, iBrisbane ayintsonkothanga kukuhamba ngenqwelomoya, ngololiwe, ngebhasi nangendlela.
SikwayiPet Friendly ngesicelo!
4.95 ·Izimvo eziyi-38
Izimvo eziyi-2 206